Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Lalao Gay 2026: Nahazo isa lehibe i Espaina Valencia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • LGBTQ • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Valencia no nanao izany. Ny tanàna espaniola no hampiantrano ny lalaon'ny pelaka amin'ny taona 2026. Taorian'ny volana maromaro niomanana sy ny fanolorana farany ny filatsahan-kofidiana teo anoloan'ny Federasionan'ny lalaon'ny pelaka (FGG) tamin'ity herinandro ity, dia nahavita nandresy lahatra ireo mpitsara ny delegasiona Valenciana.
Ny Lalao Gay dia hetsika ara-panatanjahantena/kolotsaina izay, nanomboka tamin'ny 1982, dia manome tontolo tsara ho an'ny fanao ara-panatanjahan'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+.
Ny hetsika dia manana ny fandraisana anjara, ny fampidirana ary ny fahasamihafan'ny foto-kevitra fototra.
Ny firotsahan'i Valencia dia nihoatra an'ireo mpifaninana Munich, Alemana, ary Guadalajara, Meksika, mikendry ny ho tanàna misokatra, cosmopolitan, manaja ny fahasamihafana, ary tanàna mitambatra.
Ny federasiona iraisam-pirenena dia nanapa-kevitra ny hanohana an'i Valencia amin'ny fiheverana ny fahaizany mampiantrano hetsika mitovy habe ny Lalao Gay. Midika izany fa noheverin’ny vaomiera nitsidika ny toeram-panatanjahantena teny an-toerana teny an-toerana ny kalitaon’ny fotodrafitrasa ao aminy.
Ankoatra izany, Valencia, Espaina, manana toetra mahasarika noho ny toetrandro misy tara-masoandro mihoatra ny 300 isan-taona, ny sakafo mahavelona azy, ary ny fandaharam-potoany ara-kolontsaina. Nankasitrahana ihany koa ny fahafahana miditra sy ny fifandraisana amin'ny tanàna, ny fanoloran-tenany amin'ny faharetana sy ny toerana maitso, ary ambonin'izany rehetra izany ny fahafahan'ny fampandrosoana manokana atolotry ny tanàna ho an'ny olona rehetra na inona na inona lahy sy vavy, na zom-pirenena, na toe-batana, na fironana.
Ny Lalao Gay Valencia 2026 dia hatao eo anelanelan'ny Mey sy Jona. Herinandro mahery no haharitra ity hetsika ity ary hampiantrano ireo fifaninanana fanatanjahantena 30 mahery. Anisan'izany ny fanatanjahantena eo an-toerana toy ny mpanamory fiaramanidina Valencian, fanatanjahantena nentim-paharazana tena ilaina amin'ny tantara sy kolontsaina eo an-toerana, ary ny colpbol, fanatanjahantena ekipa, ary avy eo ny fanatanjahan-tena an-drano toy ny sambo, ny fivoy ary ny polo lakana ary ny haiady. Hisy ihany koa ny fanatanjahantena toy ny basikety, volley beach, hockey, soccer, softball, ary rugby, ary taranja manokana toy ny fencing, tennis, golf, ary bisikileta, ary koa ny zava-baovao toy ny e-sport sy quidditch, ny fifaninanana mampahatsiahy ny Harry Potter izay hifaninanan'ireo mpilalao amin'ny fihazonana kifafa eo anelanelan'ny tongony.
Heverina fa hahasarika atleta 15,000 sy mpitsidika manodidina ny 100,000 eo ho eo ny hetsika, izay ahitana hetsika ara-kolontsaina isan-karazany, izay misy fiantraikany ara-toekarena ho an’ity tanàna mitentina 120 tapitrisa euros mahery ity. Amin'io lafiny io, ny Lalao Gay dia ho lasa hetsika ara-panatanjahantena manan-danja indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamonina Valencian aorian'ny fiadiana ny amboaran'ny Amerika.
Ny andiany Gay Games nokasaina hatao amin'ny 2022 dia hatao amin'ny 2023 noho ny COVID any Hong Kong.
Mario Masciullo - Manokana ny eTN